Chelsea Oo Wada-hadallo La Bilowday Weeraryahan Udub-dhexaad U Ah Real Madrid Iyo Lacagta Wareerka Ah Ee Ay Ku Doonayso | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Chelsea Oo Wada-hadallo La Bilowday Weeraryahan Udub-dhexaad U Ah Real Madrid Iyo Lacagta Wareerka Ah Ee Ay Ku Doonayso
(05-12-201q8)Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa wada hadallo la bilowday xiddig da’yar oo udub-dhexaad u ah Real Madrid, kaas oo sidoo kale lala xidhiidhinayo kooxo kale.
Wargeyska Don Balon ee kasoo baxa dalka Spain ayaa shaaciyey inay bilowdeen wada-hadallo heerkoodu sarreeyo oo u dhexeeya Chelsea iyo Marco Asensio oo niyad jab ka muujiyey tababaraha cusub ee Los Blancos, Santiago Solari oo booskiisii ka tuuray intii uu xilka hayey.
Chelsea ayaa diyaarisay lacag dhan £107 milyan oo gini oo ay da’yarkan xulka qaranka Spain ku doonayso inay kaga soo qaadato Real Madrid.
Warku wuxuu intaa ku daray in 22 jirkan oo ciyaartiisu hoos u dhacday xili ciyaareedkan ay doonayaan kooxo kale oo Yurub ah, laakiin fursadda ugu wanaagsan ay haysato Chelsea oo ku qancinaysa inay la mataanaynayso xiddigo ay isku waddan yihiin oo Stamford Bridge jooga.
Kooxda PSG ee lacagta badan haysata ayaa sidoo kale la sheegay inay fiirinayso dariiqyada suurtogalka ah ee ay u mari karto saxeexa laacibkan oo waayey filashadiisii ahayd inuu buuxiyo booskii uu banneeyey Cristiano Ronaldo.